တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ..ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေးဆီးချိုရောဂါ …သက်သာပျောက်ကင်းသောဆေးနည်း - Cele Channel
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး အမြန်လုပ်ဆောင်ရန် သမ္မတဟောင်း၏ ဇနီးတိုက်တွန်း
မိုးဟေကိုက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပါဆိုတဲ့ နေတိုး
ဗစ်တိုးရီးယား နေရာမှာ ခင်ဗျားသမီးကို အစားထိုးမလားလို့ ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ လင်းလင်း
သူငယ်ချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို လေးလေးနက်နက် ဖွင့်ဆိုလာတဲ့ ထူးအယ်လင်း
တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ..ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေးဆီးချိုရောဂါ …သက်သာပျောက်ကင်းသောဆေးနည်း
June 27, 2019 jokerbank	0 Comments
တ ကမ္ဘာလုံး သိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေးဆီးချိုရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းသောဆေးနည်း
မိတ်ဆွေ တို့မိသားစုဝင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ဆီးချိုရောဂါကြောင့် စိတ်သောကရောက်နေသူရှိလျင်ဤဆေးနည်းကို ပြောပြပေးခြင်းအားဖြင့် မိမိကဲ့သို့ ဆေးဒါနပြု၍ကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်ပါ။
ဆီးချို ရောဂါ အတွက် ဆေးနည်း
လို အပ်သောဆေးမှာ နှစ်မျိုးသာဖြစ်ပါသည်။
သံ ပု ရာသီး တစ်လုံးနှင့် ထိုသံပုရာသီးနှင့်အလေးချိန်တူသည့် ဂျင်းအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကို ပုံပြပါအတိုင်း ရှာထားရမည်။
ရှာထားသော သံပုရာသီးတစ်လုံးကို အရည်ရွှမ်းလာအောင်လက်ဖြင့်ဖိလှိမ့်ပြီး နှစ်ခြမ်းခွဲ၍-အရည်ညှစ်လိုက်ပါ။ကြွေဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ရပါကအစေ့ဖယ်ပြီး အကြမ်းပန်ကန်လုံးထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ။
ထို့နောက် အရည်ညစ်မည့် သံပုရားသီးအလေးချိန်တူ ဂျင်းကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အရည်ထွက်အောင် သစ်သားငရုတ်ဆုံးသန့်သန့်၌ ထောင်းလိုက်ပါ။
ထောင်း၍ညက်နေသော အရည်နှင့်အဖတ်အားလုံးကိုစွတ်ကျယ်သားပိတ်စဖြင့် အရည်စစ်၍ သံပုရာရည်ထည့်ထားသော အကြမ်းပန်ကန်လုံးထဲ ဂျင်းရည်စစ်စစ်ကို ညှစ်ထည့်ပြီး သမအောင် ဇွန်းဖြင့် မွှေပေးရမည်။
ထိုဆေးရည်သည် ဆေးတစ်ကြိမ်သောက် တစ်ခွက်စာဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ သံပုရာရည် နှင့် ဂျင်းရည်ကို တစ်နေ့သုံးကြိမ် သောက်ရမည်။ ဆီးချို တဖြည်းဖြည်း အကျများလာပါလိမ့်မည်။
ဤဆေးသည် ဆီးချိုကျဆေးနည်းဖြစ်လို့ မိမိရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဆီးချိုတိုင်းပြီးမှ ဆေးကိုသောက်ပါ။
တစ်ပတ် မပျက်မကွက်သောက်ပြီးမှ ဆီးချိုပါဝင်နှုန်းကိုပြန်တိုင်းလျင် အံ့သြလောက်သော အဖြေကိုရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါလိမ့်မည်။
တစ်ပတ်သောက်ပြီး အရမ်းအကျများလာပါက တစ်နေ့လျင် နေ့ ည နှစ်ကြီမ် နှစ်ခွက်သာလျင် သောက်ပါ။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူသည် အစားကိုအထူးကရုစိုက်ရမည်။ အစာစားလျင် မျိုးတူတစ်မျိုးတည်းကိုသာ စားပါ။ နံနက် ည စားသောအစာအမျိုးအစားတူရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နံနက်စာ ထမင်းနှင့် ကြက်သားပြုတ်ကြော် စားလျင် ညစားလည်း ထိုကဲ့သို့ တူရမည်။ နံနက်ထမင်းပမာဏ ဟင်းပမာဏ နှင့် ညစာ တူလျင်ပို၍အဆင်ပြေပါသည်။
ရေ တရက်လျင် နှစ်လီတာ ( ရေသန့် ၂ ဗူး)ကုန်အောင်သောက်ရမည်။ မိမိနှင့်မတည့်တာကို မစားမိဖို ပို၍ အရေးကြီးပါသည်။
တကမ်ဘာလုံးသိအောငျဖွနျ့ဝပေေးကွပါ ကိုယျတိုငျလကျတှရေ့ောဂါ ပြောကျဆေးဆီးခြိုရောဂာ သကျသာပြောကျကငျးသောဆေးနညျး
မိတျဆှတေို့မိသားစုဝငျထဲမှာဖွဈဖွဈ အပေါငျးအသငျးသူငယျခငျြးထဲမှာဖွဈဖွဈျ ဆီးခြိုရောဂါကွောငျ့ စိတျသောကရောကျနသေူရှိလငျြဤဆေးနညျးကို ပွောပွပေးခွငျးအားဖွငျ့ မိမိကဲ့သို့ ဆေးဒါနပွု၍ကုသိုလျရအောငျယူလိုကျပါ။
ဆီးခြို ရောဂါ အတှကျ ဆေးနညျး
သံပုရာသီး တဈလုံးနှငျ့ ထိုသံပုရာသီးနှငျ့အလေးခြိနျတူသညျ့ ဂငျြးအဲ့ဒီနှဈမြိုးကို ပုံပွပါအတိုငျး ရှာထားရမညျ။
ရှာထားသော သံပုရာသီးတဈလုံးကို အရညျရှမျးလာအောငျလကျဖွငျ့ဖိလှိမျ့ပွီး နှဈခွမျးခှဲ၍-အရညျညှဈလိုကျပါ။ကွှဇှေနျး တဈဇှနျးခနျ့ရပါကအစဖေ့ယျပွီး အကွမျးပနျကနျလုံးထဲ ထညျ့ထားလိုကျပါ။
ထို့နောကျ အရညျညဈမညျ့ သံပုရားသီးအလေးခြိနျတူ ဂငျြးကို ရစေငျအောငျဆေးပွီး အရညျထှကျအောငျ သဈသားငရုတျဆုံးသနျ့သနျ့၌ ထောငျးလိုကျပါ။
ထောငျး၍ညကျနသေော အရညျနှငျ့အဖတျအားလုံးကိုစှတျကယျြသားပိတျစဖွငျ့ အရညျစဈ၍ သံပုရာရညျထညျ့ထားသော အကွမျးပနျကနျလုံးထဲ ဂငျြးရညျစဈစဈကို ညှဈထညျ့ပွီး သမအောငျ ဇှနျးဖွငျ့ မှပေေးရမညျ။
ထိုဆေးရညျသညျ ဆေးတဈကွိမျသောကျ တဈခှကျစာဖွဈပါသညျ။
ထိုကဲ့သို့ သံပုရာရညျ နှငျ့ ဂငျြးရညျကို တဈနသေုံ့းကွိမျ သောကျရမညျ။ ဆီးခြို တဖွညျးဖွညျး အကမြားလာပါလိမျ့မညျ။
ဤဆေးသညျ ဆီးခြိုကဆြေးနညျးဖွဈလို့ မိမိရောဂါအခွအေနပေျေါမူတညျ၍ ဆီးခြိုတိုငျးပွီးမှ ဆေးကိုသောကျပါ။
တဈပတျမပကျြမကှကျသောကျပွီးမှ ဆီးခြိုပါဝငျနှုနျးကိုပွနျတိုငျးလငျြ အံ့သွလောကျသော အဖွကေိုရရှိမညျဖွဈကွောငျး သိရပါလိမျ့မညျ။
တဈပတျသောကျပွီး အရမျးအကမြားလာပါက တဈနလေ့ငျြ နေ့ ည နှဈကွီမျ နှဈခှကျသာလငျြ သောကျပါ။
ဆီးခြိုရောဂါရှိသူသညျ အစားကိုအထူးကရုစိုကျရမညျ။ အစာစားလငျြ မြိုးတူတဈမြိုးတညျးကိုသာ စားပါ။ နံနကျ ည စားသောအစာအမြိုးအစားတူရမညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ နံနကျစာ ထမငျးနှငျ့ ကွကျသားပွုတျကွျော စားလငျြ ညစားလညျး ထိုကဲ့သို့ တူရမညျ။ နံနကျထမငျးပမာဏ ဟငျးပမာဏ နှငျ့ ညစာ တူလငျြပို၍အဆငျပွပေါသညျ။
ရေ တရကျလငျြ နှဈလီတာ ( ရသေနျ့ ၂ ဗူး)ကုနျအောငျသောကျရမညျ။ မိမိနှငျ့မတညျ့တာကို မစားမိဖို ပို၍ အရေးကွီးပါသညျ။
← အသဲကွဲနေပီလား ဒီစာလေးကို ဖတ်လိုက်ပါ
“မိုး နေ လေ မထိအောင်လို့ ထီးလေးမိုးပေးခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမေ ” →
June 25, 2019 jokerbank 0
CeleChanel is Myanmar's favourite news, entertainment, lifestyle website. We provide you with the latest breaking news stories everyday.
Categories Select Category Business (3) CELEBRITY (21) Drinks (1) Entertainment (9) Fashion (6) Featured (8) Female (2) Fitness (21) Outdoors (13) Stretching (13) Training (13) Food (16) Gadgets (16) General (9) Health (20) Knowledge (2) Latest (4) Lifestyle (23) News (25) Politics (3) Science (13) Sports (7) Style (5) Technology (5) TOP STORIES (1) Uncategorized (2) Weight Loss (13) WordPress (1)
Copyright © 2019 Cele Channel. All rights reserved.